China Chain Link Fefy vonjimaika mpamatsy, mpamatsy fehin-tànana rohy maharitra mpamatsy
Fefy amin'ny fanatanjahan-tena
Fefy Link Rohy Vonjimaika azo apetraka haingana sy mora. Ny fitokana-monina vonjimaika, ny fizarazarana vonjimaika ary ny tadivavarana vonjimaika dia ireo vokatra azo zahana. Miorina indrindra amin'ireo singa azo esorina mba hampifandraisina amin'ny fomba mahazatra ny vatan'ny mpiambina amin'ny fototra na ny tsangambato mpiambina, tsy mihady ny tany na mametraka ny fototra amin'ny tany, ary azo foanana mora foana ary afindra amin'ny fametrahana raha ilaina ny fepetra takiana. Ny tena mampiavaka ny firafitra: kely ny harato, matanjaka ny fahombiazan'ny fiarovana fototra, tsara tarehy ny bika aman'endrika, ary azo namboarina arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
Fefy amin'ny Football Football
Pairesy Fefy Rohy
rojo rojo fefy maharitra